Xaalad kacsanaan ah oo wali ka jirta Islii, iyo bilayska oo wada hawlgalo amni-sugid.. – Radio Daljir
Nofeembar 19, 2012 9:53 b 0
Nairobi, Nov 18 – Xaaladda xaafadda Islii oo ka tirsan degmada Kaama-kuuji ee magaalada Nairobi ayaa wali kacsanaan xooggani ay ka jirtaa kaddib markii shalay galab uu ka dhacay qarax sababay dhimasha 7 ruux iyo dhaawaca dad ku dhaw 30 qof oo kale.
Dhicitaalka qaraxaasi oo aan illaa iyo haatan la ogaanin ciddii wadatay, waxaa uu dhaliyey jaahwareer iyo qalalaase rabshadaysan oo ka curtay xaafadda Islii, taasoo dhawr ruux ay ku dhaawacmeen, laguna boobay hanti dad ganacsato ahi ay lahaayeen.
Dadka rabshadda gaystay oo Kenyaati iyo Somaliba iskugu jira, ayaa ku hubaysan biro iyo baangado afaysan, kuwaasi oo ay dadka iyo dukaamadaba ay ku weerarayaan, waxaana dawladda Kenya ay sheegtay xiisadaha dhacay in ay ka faa’idaysanayaan kooxo ujeedkoodu yahay in ay boob iyo dhac gaystaan oo kaliya.
Inta badan goobaha ganacsiga ee xaafadda Islii ayaa maanta xiran, waxaana la fasaxy ardadii Iskuullada, iyadoo dhammaan waddooyinkana lagu daadiyey ciidamo bilays ah oo baaritaanno ku samaynaya dadka iyo gaadiidka intaba.
Baaritaannadaan ammaan ee maanta intii ay socdeen, waxaa la qabqabtay dad badan oo bilaysku uga shaakiyeen in ay qayb ka yihiin rabshadaha dhacay, waxaana wali la wadaa qorshayaal lagu xoojinayo amniga xaafadda Islii.
Dhawrkii bilood ee ugu dambeeyey illaa afar qarax ayaa ka dhacay xaafadda Islii, inkastoo ay yaraayeen khasaaraha ay gaysteen marka laga reebo midkii shalay dhacay, waxaana la qabtay intii badnayd dadkii fuliyeyey weeraradaasi, kuwaasi oo noqday muwaadiniin madaw ah oo dalka u dhashay, inkastoo qaar Soomaali ahina ay ku jireen.